Landa amavidiyo we-Instagram: Izindlela ezi-7 Zokwenza Abalandeli ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Landa amavidiyo e-Instagram: izindlela ze-7 zokwenza
Januwari 2, 2019 0 Comentarios 1328
Amavidiyo e-Instagram ayindlela esingalinganisa ngayo ukuthandwa kwethu ku-inthanethi, noma cha. ¿QKwenzekani uma ufuna ukulanda amavidiyo we-Instagram, wabelane nabo futhi ubabone ngesikhathi sabo samahhala?
Noma kungukudala okumangalisayo noma okuqukethwe kwekhwalithi okuvela kubangani bakho, ukulanda amavidiyo we-Instagram kungumoya. Vele ukhethe eyodwa yezindlela ezingezansi bese uthola lokhu okuqukethwe manje. Nathi siyakutshela ungathola kanjani abalandeli abaningi.
I-1 Ukulanda ividiyo kwe-Instagram
Kutholakala ku: Android
Abasebenzisi be-Android bangathola izicelo eziningi ezikhethekile landa amavidiyo we-Instagram ku-Google Play Isitolo (amathiphu wokusebenzisa i-Google Play Isitolo).
Okudume kakhulu yi-Video Downloader ye Instagram. Ikuvumela ukuthi ulande noma uphinde uthumele amavidiyo we-Instagram ngokuthepha okukodwa. Uhlelo lokusebenza lungalanda ngisho namathegi ahambisana namavidiyo.
Okuqukethwe okulandiwe kufakwa ngokuzenzakalela kuhlelo lokusebenza lwegalari lwefoni yakho.
Kuyatholakala kwi: Android, iOS, web
Ngabe ufuna ukulanda wonke amavidiyo akho ku-Instagram? Noma mhlawumbe gcina amavidiyo we-Instagram owathandayo? Ungahlela i-applet ye-IFTTT. Ukuze i-applet isebenze, uzodinga i-akhawunti ye-IFTTT, i-akhawunti ye-Instagram, kanye ne- eyinqolobane.
Umphumela wenqubo ezenzakalelayo lapho noma iyiphi ividiyo ye-Instagram oyengeza noma oyithandayo ilandwa ngokuzenzakalela futhi ingezwe kufolda yakho yeDropbox oyikhethile. Yini engaba lula kunalokho?
Kuyatholakala ku-: Web
I-PostGraber yehlukile kwamanye amathuluzi wokulanda we-Instagram amaningi asuselwa kuwebhu. Ngenkathi iningi labo lingathatha kuphela isiqeshana esisodwa sokuqukethwe ngeposi, iPostGraber ingalanda zonke izithombe namavidiyo ahlobene nokuthunyelwe okukodwa.
Konke okudingayo i-URL ye-Instagram post ofuna ukuyilanda. Ungayithola kuhlelo lokusebenza lweselula ngokuya ku- Kopisha isixhumanisi, noma kusuka kubha yekheli lesiphequluli kuhlelo lokusebenza lewebhu.
Namathisela i-URL ebhokisini lewebhusayithi le-PostGraber bese uqhafaza kulo Ir. Uhlelo lokusebenza lewebhu luzonakekela konke okunye.
Nota: Lolu hlelo lokusebenza lusebenza kuphela nokuthunyelwe kwe-Instagram komphakathi.
Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi yini i-Instagram engayenzela ibhizinisi lakho?
4. Ukudonswa phansi
IDredown, esisabizwa ngegama layo langaphambilini, i-Instadown, ingelinye lamathuluzi wangempela wokulanda amavidiyo e-Instagram, futhi isasebenza.
NjengePostGraber, wonke amaDredown adinga ukusebenza yi-URL. Namathisela i-URL ebhokisini bese uqhafaza Dredown . Ngemizuzwana embalwa, isiphequluli sakho sizoqala ukulanda ifayela le-MP4.
IDredown isebenza ngezinsizakalo eziningi kune-Instagram kuphela. Ungayisebenzisa futhi ukulanda okuqukethwe ku-YouTube, Facebook, Keek, Twitter, Twitch, Vineo, Vimeo, Metacafe, Vevo, Kohtakte, neTumblr. Kuzo zonke izinsizakalo ezisekelayo, udinga kuphela i-URL yeposi, ividiyo, noma isithombe ofuna ukusigcina.
Kutholakala ku: iOS
Kulungile, ngakho-ke simboze izinhlelo zokusebenza ze-Android nezewebhu. Kepha ungalanda kanjani amavidiyo we-Instagram ku-iOS?
Yebo, kunezicelo ezimbalwa ku-App Store ezithi zivunyelwe ukukhipha amavidiyo, kepha zivame ukugcwala izikhangiso nokuthengwa ngaphakathi kohlelo futhi kunzima ukuzisebenzisa.
Okuhlukile yi-Regrammer. Uhlelo lokusebenza lukhululekile ngokuphelele, futhi noma lusekelwa ngezikhangiso, izikhangiso akuzona ezicasulayo.
Futhi, uzodinga i-URL yevidiyo ye-Instagram ofuna ukuyilanda ukuze uhlelo lokusebenza lusebenze. Uma unayo, vula uhlelo lokusebenza le-Regrammer, unamathisele i-URL, bese uqhafaza Ukubuka kuqala .
Ekhasini lokugcina, ungakhetha ukulanda ividiyo edivayisini yakho noma uyiqambe kabusha ngegama lakho.
Landa: I-Regrammer (Mahhala)
I-OG Instagram ayikho ku-Google Play Isitolo. Ukuze uthole izandla zakho kuso, uzodinga ukulanda uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho ye-Android.
Uhlelo lokusebenza akuyona nje indlela yokulanda nokugcina amavidiyo we-Instagram ku-Android, libuye lifakwe ngokugcwele elikuvumela ukuthi ulandele ama-hashtag, usebenzise ama-akhawunti amabili kudivayisi efanayo, buka isithombe sephrofayili sabasebenzisi (cindezela isikhathi eside), futhi yabelana ngama-URL kuzinhlelo zokusebenza zangaphandle.
Landa: I-OG Instagram (Mahhala)
Sikushiya nesicelo esisodwa sewebhu. Kuhlale kuwukuhlakanipha ukugcina izinhlelo zokusebenza ezimbalwa zewebhu zokulanda amavidiyo we-Instagram ku-arsenal yakho, njengoba ejwayele ukwehla izinsuku ezimbalwa ngasikhathi.
Okwamanje, uzobe usuyazi inqubo yokusebenzisa insiza. Thola i-URL yevidiyo noma isithombe osifunayo, bese usinamathisela kuhlelo lokusebenza lewebhu leGramblast bese uqhafaza Landa .
Kuya ngosayizi wefayela, kufanele ube ne-MP4 entsha kwikhompyutha yakho ngemizuzwana nje. Ungasebenzisa ividiyo ukuyilayisha kabusha kwinethiwekhi ehlukile yezenhlalo, noma umane uyigcine kwi-hard drive yakho ukuze isetshenziswe kamuva.
Khumbula amalungelo obunikazi ama-Instagram video
Njengoba kulula landa amavidiyo e-instagramUngakhohlwa ukuthi awunawo amalungelo ngamavidiyo ongawenzanga.
Yebo, ungazilanda. Yebo, ungazijabulela. Kepha ungazikhokhisi njengezakho, noma uzihambise ngenye indlela, ikakhulukazi ngaphandle kokunikeza isikweletu esifanele. Ubungeke uthande ukuthi benze okufanayo nakuwe.
Ezinye izindlela zokulanda amavidiyo e-Instagram
Uma lezi zinhlelo zokusebenza eziyisikhombisa zingayinikezi imiphumela ofuna ukuyilanda amavidiyo we-Instagram, kunezinye izindlela ongazisebenzisa.
Isibonelo, ungasebenzisa olunye lwezinhlelo ezijwayelekile ezikuvumela ukulanda amavidiyo asakazayo kumawebhusayithi. I-VideoGrabby, i-Video DownloadHelper, ne-Freemake Video Downloader zonke izinketho eziqinile kulo mnyango.
Ungase futhi uthande ukwazi okwengeziwe izibalo ku-Instagram Izindaba.
1 I-1 Ukulanda ividiyo kwe-Instagram
4 4. Ukudonswa phansi
5 I-5 I-Regrammer
7 I-7 Gramblast
8 Khumbula amalungelo obunikazi ama-Instagram video
9 Ezinye izindlela zokulanda amavidiyo e-Instagram
Januwari 2, 2019
Ukuthengisa kwe-Intanethi kusiza kanjani inkampani yakho ukuthi ibonwe
Ungazisebenzisa Kanjani Izindaba ze-Instagram zebhizinisi lakho